Radio Don Bosco - Raki-tsarobidy
Naseho ny : 5 janoary 2020
Fety lehibe , tsy afaka misaraka amin'ny Noely ny Epifania. Misy hevi-pinoana lalina fonosin'izany. Fandalinam-pinoana miaraka amin'i P. Justolat E. Rafaralahimboa:
Fianakaviana: fanomezana ny zanaka
Naseho ny : 12 desambra 2019
Hafalian'ny fianakaviana sy ny fiaraha-monina ny zanaka, hoy ny Papa François. Fanomezan'Andriamanitra izy ireo. Manana fifandraisana lalina ny ray aman-dreny sy ny zanaka noho izy ireo mifaningotra aina. Tohin'ny Katesizin'ny Papa François momba ny fianakaviana, miaraka amin'i P. Justolat E. Rafaralahimboa :
Fianakaviana: zanaka loharanon-kafaliana
Naseho ny : 11 desambra 2019
Rehefa avy nandinika ny endrika sy ny anjara toeran’ny reny sy ny ray isika dia hijery indray ny momba ny zanaka fa izay no maha-fianakaviana ny fianakaviana. Loharanon-kafaliana ny zanaka. Tohizintsika ny katesizin'ny Papa François momba ny fianakaviana, miaraka amin'i P Justolat E. Rafaralahimboa ao amin'ny "Fiangonana iraka, mpamafy fiadanana sy fanentanana" :
Fianakaviana : Famindram-pon'ny ray
Tokony hamindra-fo sy hanetry tena ny raim-pianakaviana, hoy ny fampianaran'ny Papa François, ary tokony hanam-paharetana izy ireo amin'ny fanabeazana ny zanany. Tohin'ny katesizin'ny Papa François momba ny fianakaviana, ataon'i P Justolt E. Rafaralahimboa: